रोचक संसार – Saurahaonline.com
संसारकै पहिलो विमानबारेको यस्ता छन् रहस्य ! २०७७, १० माघ शनिबार
काठमाडौँ : एक समय यस्तो थियो कि मानिसहरुले हावामा उढौँला भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन् । तर विज्ञानको चमत्कार मानिसले कल्पनै नगरेका कुरा सम्भव हुँदै गएका छन् । आज हामी तपाईँलाई यात्रुबाहक विमान पहिलो पटक कहिले उडेको थियो ? आम मानिसले..
सडकमा चकलेटको नदी बगेपछि… २०७७, ५ माघ सोमबार
अहिलेसम्म तपाईले सडकमा पानी, फोहार, हिलो वा ढल बगेको देख्नु भएको होला । तर के तपाईंले कहिल्यै सडकमा चकलेटको नदि बगेको देख्नु वा सुन्नु भएको छ । जर्मनीको वेस्टोनन नामक शहरको सडकमा अचानक भारी मात्रामा चकलेट बगेको थियो । अचानक यस प्रकार भएको..
जब ६९ वर्षीया अभिनेत्रीको तस्वीर ‘अत्यधिक सेक्सी’का रुपमा ट्रोल भयो ! २०७७, २ माघ शुक्रबार
एजेन्सी । भारतकी एक ६९ वर्षीया अभिनेत्रीको तस्वीरले अहिले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । हालैका दिनमा आफ्नो ग्ल्यामरस फोटोशूटका केही तस्वीर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेकी ६९ वर्षीया रजनी चण्डी ट्रोलको शिकार बनेकी हुन् । यो..
एक खतरनाक स्थान, जहाँ सय बर्षदेखि कुनै पनि मानिस पुगेको छैन (फोटो फिचर) २०७७, २ माघ शुक्रबार
एजेन्सी : विश्वमा त्यस्ता कैयौं स्थान छन, जहाँ मानवीय उपस्थिति छैन । त्यस्ता स्थानहरु निकै रहस्यमयी पनि मानिन्छन । यहाँ त्यस्तो एक स्थानका बारेमा जानकारी दिन खोजिएको छ कि, जुन स्थानमा विगत सय बर्षदेखि कुनै पनि मानिस बसेको वा गएको छैन । फ्रान्सको..
१ सय १ वर्षकी महिलाले जन्माइन् बच्चा २०७७, २ माघ शुक्रबार
काठमाडौँ : सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने घटना । इटालीमा एकजना अनातोलिया व्हर्टाडेला नाम गरेकी १ सय १ वर्षकी महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन् । समाचार माध्यममा जनाइए अनुसार १०१ वर्षको उमेरमा जन्मिएको यो बच्चा उनको कोखबाट जन्मिएको १७ औं सन्तान हो..
कोरोना त्रास : यौनका विषयमा यस देशमा सरकारले जारी गर्यो अनौठो निर्देशन २०७७, १ माघ बिहीबार
एजेन्सी। विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि अहिले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् । प्राय देशहरुले आफ्ना नागरिकका लागि विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरिरहेका छन् । यस्तै, अष्ट्रेलियाले पनि कोरोना..
अचम्मको परम्पराः जहाँ जिउँदै मानिसलाई गाडिन्छ, विवाह जसरी खुशी मनाइन्छ २०७७, २९ पुष बुधबार
काठमाडौं । विश्वका सबै देशमा आ आफ्नै संस्कार र संस्कृति हुन्छ । तर जिउँदै मानिसलाई जमिनमा गाडिन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सकिन्छ । यो प्रथा क्युबामा छ । क्युबामा यो परम्परालाई बूजी फेस्टिबलका रुपमा चिनिन्छ । यो परम्परामा ज्युँदै मान्छेलाई जमिनमा..
पूर्वजन्मका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ त ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता २०७७, २८ पुष मंगलवार
काठमाडौं : हरेक कोहीलाई पछिल्लो जन्मका बारेमा जान्नका लागि उत्सुकता बढ्छ । ज्योतिषको भाषामा मनुष्यको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म पनि उसको पुनर्जन्मसम्मका कुरालाई ग्रह तथा नक्षत्रका आधारमा भन्ने गरिन्छ । शास्त्र र पुराणमा लेखे अनुसार मनुष्यले..
यस्तो छ पूजा गर्दा धूप बाल्नुको रहस्य २०७७, २८ पुष मंगलवार
काठमाडौँ : सामान्यतय पूजा पाठ गर्दा धूप बाल्ने प्रचलन चलिआएको छ । तर, पूजाको समयमा धूप किन बालिन्छ त भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आज हामीले पूजामा धुप बाल्नुको रहस्य उल्लेख गरेका छौँ । खासमा धूपको धुँवाले घरको नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ..
उडिरहेको जहाजभित्रै शारीरिक सम्बन्ध ! यात्रु चकित !! २०७७, २७ पुष सोमबार
लन्डन – भर्जिन अटलान्टिक विमानमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले उडिरहेको विमानमा नै शारीरिक सम्बन्ध राखेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् । १३ मार्चमा गटविक एयरपोर्टबाट मेक्सिकोका लागि उडेको विमानमा ती महिलाले अपरिचित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानीपछि यौन..